Ithiphu: Ungazithola Kanjani Izithombe Ezifana Ne-Vector Esitokisini Sakho Sokuthenga Ngezithombe Nge-Google Image Search | Martech Zone
Izinhlangano zivame ukusebenzisa amafayela e-vector ezinelayisense nezitholakala kumasayithi wesithombe esitokwe. Inselelo iza lapho befuna ukuvuselela ezinye izibambiso ngaphakathi kwenhlangano ukufanisa isitayela nokubeka uphawu okuhambisana nezithonjana noma izimpawu ezazikhishwe ngaphambilini.
Ngezinye izikhathi, lokhu kungabangelwa yinzuzo futhi… kwesinye isikhathi abaklami abasha noma izinsizakusebenza ze-ejensi zithatha imizamo yokuqukethwe nokuklama ngenhlangano. Lokhu kusanda kwenzeka nathi njengoba sithathe ukusebenzela inkampani futhi siyisiza ekwakheni okuqukethwe.
Sebenzisa i-Google Image Search ukuthola ama-Vectors afanayo eSitokisini Sezithombe Eziyisitoko
Icebo engingathanda ukuhlanganyela nawo wonke umuntu ukusebenzisa ukusesha nge-Google Image. Ukusesha isithombe kwe-Google kukunika amandla okulayisha isithombe bese uphendula ngezithombe ezifanayo kuwebhu yonkana. Isinqamuleli esisodwa, nokho, ukuthi ungasesha indawo ethile… njengesayithi lesithombe esitokwe.
Ngibe yikhasimende elihambisanayo futhi lesikhathi eside Depositphotos. Banokukhethwa okuhle kakhulu kwezithombe, amafayili e-vector (i-EPS), namavidiyo kusayithi labo anezintengo ezithile ezehlukile nelayisense. Nakhu ukuthi ngisebenzisa kanjani i-Google Image Search ukuthola ama-veector angeziwe kusayithi labo afana nesitayela esifanayo.
Ngesibonelo esingenhla, ngidinga ukuthekelisa isithombe sami sevektha kwifomethi ye-png noma ye-jpg ukuze ngisilayishe ku-Google Image Search:
Ungayisesha Kanjani I-Stock Photo Site Yama-Vectors Afanayo
Isinyathelo sokuqala ukusebenzisa i- Usesho Lwesithombe se-Google. Isixhumanisi salokhu sisekhoneni eliphezulu kwesokudla sekhasi lasekhaya le-Google.
I-Google Image Search ihlinzeka nge- layisha icon lapho ungalayisha khona isithombe sesampula ofisa ukusifuna.
Usesho Lwesithombe se-Google inikeza isithonjana sokulayisha lapho ungalayisha khona isithombe sesampula ofisa ukusifuna. Kukhona futhi inketho yokunamathisela i-URL yesithombe uma wazi ukuthi isithombe sihlala kuphi kusayithi lakho.
Manje i Ikhasi Lemiphumela Yokucinga Ngezithombe ze-Google izonikeza isithombe. Kungafaka nemigomo yemethadatha efakwe kufayela lesithombe.
Nakhu lapho iqhinga likhona… ungangeza ifayela le- ipharamitha yokusesha ukusesha ngaphakathi kwewebhusayithi eyodwa usebenzisa i-syntax elandelayo:
Ngokuzithandela, ungangeza namanye amagama uma uthanda, kepha imvamisa angikwenzi lapho ngifuna ama-vectors ukuze ngithole imitapo yolwazi ephelele yama-vectors afanayo engizoyilanda futhi ngiyisebenzise.
The Ikhasi Lemiphumela Yokucinga Ngezithombe ze-Google iza nemiphumela ekhethiwe efana nesithombe sokuqala. Imvamisa ungathola i-vector yangempela ngaphakathi kwemiphumela!
Manje sengikwazi ukubhekabheka Depositphotos kusuka kule miphumela, thola izithombe noma imitapo yolwazi efana nayo, bese uyisebenzisela imiklamo eyengeziwe esiyakhela iklayenti!
Ukudalulwa: Ngisebenzisa isixhumanisi sami sokuxhumana se- Depositphotos kulesi sihloko.
Tags: Ukufaka uphawuamadingaEPSusesho lwesithombe se-googleipharamitha yokusesha ye-googlei-illustratorindawo yokucingaukusesha isayithiisithombe sesitokoama-stock vectorsamafayela e-vector
I-infographic: Umhlahlandlela Wokuxazulula Izinkinga Zokulethwa Kwe-imeyili